Gool FM | Waxaan Nahay	Sunday, February 14th, 2016	Home
Gool FM waa idaacaddii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ee u gaar ah arrimaha cayaaraha. Idaacaddu waxay xoogga saareysaa sidii ay u dabooli lahayd baahida warbaahin ee ay qabaan dhallinyarada Soomaaliyeed ee jecel isboortiga.
Gool FM waa idaacad gaar loo leeyahay oo ganacsi oo fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho, waxayna higsaneysaa inay noqoto isha koowaad ee wararka cayaaraha ka dhacaya dalka iyo dibeddaba.
Baahida Idaacaddan waxay timid kaddib markii aan aragnay in dhammaan idaacadaha laga furay Soomaaliya aysan waqti ku filan siinin arrimaha isboortiga. Sidaasi darteed idaacaddani axay horumarin doontaa isboortiga Soomaaliya.
Maxaa nagu dhaliyay idaacaddani?
Idaacaddani waxay baahideedu noo muuqatay kaddib markii aan aragnay arrimahan:
Idaacadaha gudaha dalka ka dhisan ma siiyaan waqti ku filan arrimaha cayaaraha. Intooda badan waxay leeyihiin barnaamijyo aan ka badneyn 30 daqiiqo hal mar maalintii, taasoo aan dabooli karin isboortiga adduunka iyo kan Soomaalida.
Dhallinyarada Soomaaliyeed ee xiiseysa cayaaraha ma haystaan fursado ay iyagoo guryahooda jooga ku daawan karaan cayaaraha. Sidaasi darteed raadiyuhu wuxuu u sahlayaa inay la socdaan cayaaraha meel kasta oo ay joogaan.
Diseembar 2010 illaa horraantii 2012 waxaa la qabtay tartanno cayaaro oo ka kala dhacay Somaliland, Puntland iyo Muqdisho, kuwaasoo ay shacabka Soomaaliyeed si weyn u soo dhoweeyeen. Dadkii isugu soo baxayay cayaaraha, gaar ahaan Muqdisho oo uu ka jiro culeys amni, waxay muujineysaa taageerada ballaaran ee uu isboortigu leeyahay.
Soomaaliya waxay leedahay fursad lagu horumarin karo cayaaraha noocyada kala duwan. Waxaa tusaale u ah kooxda kubadda kolayga ee gabdhaha Soomaaliyeed ayaa guulo waaweyn ka soo hooyay tartankii kubadda kolayga gabdhaha ee Jaamacadda Carabta ee lagu qabtay dalka Qadar. Sidoo kale dhanka cayaaraha kubadda cagta, kooxda Soomaaliya dadaal weyn ayay muujiyaan iyadoo ay jiraan duruufo dhaqaale iyo amni oo aan u suurtogelineyn inay kooxahaas tababartaan ama dalkooda loogu yimaado.
1. In dadka jecel isboortiga ay helaan warar iyo macluumaad, iyagoo macluumaadkaasna ku helaya afkooda hooyo. Sidaasi darteed Gool FM wuxuu noqonayaa bartii loogu soo hagaagi lahaa wax kasta oo ku saabsan cayaaraha dalka iyo dibedda.
2. In sare loo qaado aqoonta shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan dhallinyaradu, u leeyihiin isboortiga, iyadoo ay idaacadda ka heli karaan macluumaad ay bixinayaan dad aqoon u leh isboortiga.
3. In la horumariyo cayaaraha dalka Soomaaliya, iyadoo laga hadlayo dhibaatooyinka haysta cayaaraha dalka iyo sida lagu horumarin karo.
4. In la soo saaro dhallinyaro leh karti dhinacyada kala duwan ee isboortiga sida kubbadda cagta, kolayga, orodka, iwm, kuwaasoo matali kara dalka Soomaaliya ama sameysan kara mustaqbal dhinaca isboortiga ah.
5. Inay gacan ka geysato sidii loo abuuri lahaa ganacsi isboorti (sports industry) oo sare u qaada dhaqaalaha dalka, abuurta fursadaha taabba-gelinta ganacsiga (business sponsorships), daawadayaal gudaha ah, billaabista horyaallo gudaha ah oo sare u qaada tayada cayaaraha gudaha, iwm.
6. In dhallinyarada laga duwo waxyaabaha anshaxa xun sida qabyaaladda, daroogada, iwm laguna jeediyo isboortiga oo wax taraya caafimaadkooda iyo waxtarkooda.
7. In la abuuro jawi is-dhex-gal bulsho oo loo sii marayo cayaaraha.
8. In la siiyo dadweynaha fursad ay ku cabbiraan dareenkooda cayaaraha dalka gudahiisa iyo dibeddiisa ka socda.
9. Inuu uruuriyo taariikhda cayaartoyda iyo kooxaha Soomaalida, si jiilashada cusub ay ula socdaan sooyaalkii cayaaraha Soomaalida.
10. In la hormariyo warbaahinta tebisa cayaaraha oo gacan laga siiyo idaacadaha kale qaabkii ay u tebin lahaayeen cayaaraha.
Bahdii Isboortiga ee Jaaliyadaha USA iyo Canada oo Hambalyo gaarsiinaya Macalin Iskoot & Da’yartiisa 11-jirada ah